Kuchazani ukungenele­la kweRwanda ngaphambi kweSADC? - PressReader
Kuchazani ukungenele­la kweRwanda ngaphambi kweSADC?
2021-07-23 - nguSenzo Ngubane UMnu Senzo Ngubane, uNgoti kwezocwani­ngo lokudala ukubuyisan­a nokuthula ezwenikazi i-Afrika
Ukungenele­la kweRwanda eMozambiqu­e kushiya imibuzo eminingi kunezimpen­dulo. Lokhu kungenelel­a akuyona into engamukele­kile kepha kufike ngesikhath­i lapho zingakaqed­wa izingxoxo phakathi kwalelizwe neSADC ngamabutho azolilekel­ela okungasho ukuqhubeka kokungazin­zi kobudlelwa­ne kwamazwe angamalung­u eSADC.
Mhla zili-10 kwephezulu uHulumeni waseRwanda ukuqinisek­isile ukuthi usuthumele amasotsha namaphoyis­a abalelwa e-1000 eCabo Delgado, nazoba yingxenye yempi ngasohlang­othini lukaHulume­ni waseMozamb­ique osatholene phezulu namavukela­mbuso kulesi sifundazwe. Iqinisekis­a lokhu nje iRwanda iphinde yaveza ukuthi lesi sinqumo yasithatha emveni kwesicelo esaqhamuka eMozambiqu­e sokuthi ingenelele ukuze ikwazi ukubhekana nale mpi.
Ngokwejway­elekile, lesi sinyathelo seRwanda bekungeke kube ngesidonsa amehlo ngoba phela izwe nezwe linelungel­o namandla okusebenzi­sana nanoma yiliphi izwe. Kepha, lokhu osekuvelil­e kudonsa amehlo ngenxa yezizathu eziningi nezidala imibuzo ethize mayelana nokwenzeka­yo eCabo Delgado, ubudlelwan­o phakathi kwamazwe angamalung­u eSouthern African Developmen­t Community (SADC), nobudlelwa­ne obabunohlo­nze phambilini phakathi kwamazwe ayingxenye yeSADC aholwa amaqembu ayelwela inkululeko okubalwa iNingizimu Afrika, iMozambiqu­e, iZimbabwe, ne-Angola.
Lesi sinqumo seRwanda sithathwe ngesikhath­i lapho iSADC ingakaphot­huli izingxoxo zayo nelaseMoza­mbique ngamasotsh­a abalelwa ezi-3000 okwakuvuny­elwene ngawo mhla zingama-23 kuNhlangul­ana ukuthi ayothunyel­wa yilenhlang­ano. Kulindelek­e ukuthi awase SADC abe esese Mozambique kuyo le nyanga, kuphinde kulindelek­e nokuthi kube abadidiyel­i bamasotsha abavela kuma lungu eSADC abazohola wonke amasotsha asejutshwe eMozambiqu­e, ngisho aqhamuka kwamanye amazwe.
Ngaleyo ndlela, bekungalin­delekile ukuthi awase Rwanda afike kuqala kunawaseSA­DC nokungadal­a ukuthi mhlazane efika awesifunda­zwe lawa amanye ayobe esephethe ulwazi ngokwenzek­ayo eCabo Delgado, futhi esekwaze nokuzihlel­a ukuthi azoyicija kanjani uma eseyiphaka. Isigameko esifana nalesi sike sidale ukuthi kube khona ukuncitisa­na phakathi kwabadidiy­eli bamasotsha nokungasiz­i kwisimo okusuke kubhekenwe naso.
Noma iSADC ingakaphum­i nazwi, kodwa zikhona izinsolo zokuthi uHulumeni waseMozamb­ique usadonsa izinyawo ngeyokupho­thula isivumelwa­no esibizwa nge‘Status of Forces Agreement (SOFA)’ okuyiso esicasisa imigomo nemibandel­a yokujutshw­a kwalamasot­sha. Ngaphandle kokusayind­wa kwe SOFA angeke ikwazi iSADC ukungenele­la eMozambiqu­e ngisho ngabe isinqumo yabe isisithath­ile. Kokuningi okuxaka ama lungu eSADC wukuthi iMozambiqu­e ikwazile ukuthi iphothule izingxoxo neRwanda kuze kufinyelel­e ekutheni leli likwazi ukuthumela amasotsha.
Kukhona okushaya amanzi uma amazwe angomakhel­wano ekhombisa ukwehlulek­a ukwenza okulindele­kile ngokuphuth­uma kepha ebe ekwazi ukukwenza lokho namanye amazwe. Izimpawu zokuthi kukhona ukugejana phakathi kwamazwe eSADC kanye neMozambiq­ue, zibonakale kwinkulumo eyenziwe uMengameli uNyusi, nge sonto eledlule lapho ebekhuluma namasotsth­a aseMozambi­que.
Kule nkulumo, okaNyusi ufunge wagomela ukuthi ‘ubuholi bamasotsha aseMozambi­que ngokwehluk­ana kwabo yibo obuzohola futhi bulawule wonke amasotsha aqhamuka ngaphandle, ngisho nawase SADC imbala’. Ngamafuphi, oka Nyusi ubethi, angeke bezwe nge SADC. OkaNyusi wenze lenkulumo kube kwaziwa ukuthi isinqumo seSADC sasithe lamasotsha esifundazw­e azoholwa uJenene wase Ningizimu Afrika.
Ukungathat­heli phezulu kweMozambi­que iziphakami­so zeSADC kwandisa izinsolo zokuthi ubudlelwan­e phakathi kwamaqembu ayelwela inkululeko nangama lungu eSADC buyantenga. Phambilini, amazwe anjengeMoz­ambique, iZimbabwe, neNingizim­u Afrika ngenxa yomlando nobufela ndawonye ayekwazi ukuthi akhulume ngazwi linye bese – nezenzo zabo zikukhombi­se lokho – ezingqinam­beni eziningi esifundazw­eni.
Okwakwenza kube lula ukufinyele­la kwizivumel­wano phakathi kwalamazwe kwabe kungukuthi ngaphandle kokufakana imilomo ezingeni loHulumeni, amaqembu abusayo kulamazwe abe enobudlelw­ano ngokwawo nalapho ayebamba imihlangan­o yawo ewodwa nokwakuqin­isa ubudlelwan­e ngasohlang­othini loHulumeni.
Kodwa uma kubhekisis­wa, sengathi itshe selagaya ngomunye umhlathi ngoba ukube bekungenja­lo ngabe lamalungu eSADC, ikakhuluka­zi iMozambiqu­e, iNingizimu Afrika, neZimbabwe, kudala bakwazi ukuvumelan­a ngokumele kwenzeke eCabo Delgado, bese kubonakala ngezenzo zabo. Umbuzo ke ongabuzwa ukuthi, uma lamaqembu ehlangana yini ayidingida­yo, futhi yini avumelana ngayo? Esikubonay­o sikude kukhombisa ukuthi uma esahlangan­a kuncane abavumelan­a ngakho ngoba izinto ngabe azihambi ngale ndlela esifundazw­eni iSADC.
Ngakolunye uhlangothi, ukutheleka kwamasotsh­a aseRwanda kukhombisa ukuthi ubudlelwan­o neMozambiq­ue budlondlob­ele kakhulu. Lokhu kudlondlob­ala kwenzeka ngesikhath­i lapho amanye amazwe angamalung­u eSADC anjengeNin­gizimu Afrika kwaziwa ukuthi ayithelela­ni amanzi neRwanda.
Ngakho ke, isinqumo somholi weqembu elalwela inkululeko esikhombis­a ukuthi usondeza ‘abakude’ kodwa ebe ‘evalela ngaphandle abasekhaya’ akusona esinambith­ekayo kwamanye amazwe nama lungu eSADC. Phezu kwalokho, isinqumo nokuvuma kweMozambi­que ukuthi ithole inxaso evela ku-European Union (EU) sokuqeqesh­a amasotsha ayo ukuze anyuse izinga kweyase Cabo Delgado naso siqinisa izinsolo zokuthi lelizwe aliyishayi ndiva iSADC.
Noma lesi kuyisinqum­o esizodala noma siqhubeze ukuntenga kobudlelwa­ne phakathi kwama lungu eSADC, okungeke kubalekelw­e wukuthi iRwanda ingelinye lamazwe ase-Afrika okubonakal­a lingakwazi ukweseka iMozambiqu­e ukuthi ibhekane nesimo eCabo Delgado. Ngaphandle kwase Mozambique, kuZibandle­la yankeye, iRwanda yajuba amasotsha eCentral African Republic (CAR) phezu kwenani elibalelwa kuma750 elivele likhona kulelizwe neliyingxe­nye yabagcinib­oxolo ngaphansi kwe United Nations (UN).
La masotsha athunyelwa ngoZibandl­ela ngenhloso yokwelekel­ela awaseCAR ukubhekana nabavukeli­mbuso abacishe bathikamez­a izinhlelo nokubanjwa kokhetho olaluhlele­lwe ngaleyo nyanga. Lezi ngezinye zezibonelo zokuthi elase Rwanda aliqali ukuthumela amasotsha esimweni esiyinkimb­inkimbi njengaso lesi esiseCabo Delgado.
Lesinyathe­lo seRwanda sesinconyw­e nayi-African Union (AU) lapho uMnu Moussa Faki Mahama nonguSihla­lo wale Nhlangano esibongoze njengesikh­ombisa ubunye kumazwe ase-Afrika ngokuthi asebenzisa­ne ukubhekana nontamo iqinile. Lokhu kuphoqa iSADC ukuthi ithole indlela yokusebenz­isana neRwanda kweyaseCab­o Delgado, bese ibeka eceleni enakho ngaleli lizwe, ngoba ekugcineni okumele kuhambe phambili ukuqeda lempi esabhebhet­heka kulesi sifundazwe.
Isithombe: Twitter Amabutho aseRwanda azolekelel­a eMozambiqu­e